WINDOWS 10 ကိုအတွက်ဖိုင် EXTENSION ပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
Windows 10 ကိုအတွက်ဖိုင် extension ပြောင်းပေးပါ
ဖိုင် extension OS ကိုစနစ်တကျအရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ဖွင့်ဖို့ဆန္ဒရှိအစီအစဉ်ကိုရှေးခယျြနိုငျကြောင်းသေချာစေရန်တည်ရှိနေ။ Windows 10 ကိုမှာဖိုင်အမျိုးအစားအသုံးပြုသူများ၏အဆင်ပြေဘို့, ပုံမှန်အားဖြင့်ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows7ကိုအတွက်ဖိုင် extension ပြောင်းပေးပါ
အသုံးပြုသူတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရာဝတ္ထု၏ပုံစံကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်အခါ, သငျသညျပြောင်းလဲအသုံးပြုသင့်ပါတယ် - ဒီခြေလှမ်းမှန်ကန်သောကြည့် contents တွေကိုသေချာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဖိုင် extension ကိုပြောင်းလဲခြင်း - ကအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်တခုကိုင်ကြောင့် standard Windows ကိရိယာတွေသုံးပြီးပိုမိုတိကျစွာ, ကိုယ်တိုင်ပြုသောအမှုသို့မဟုတ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်အထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်။ သို့သော်စတင်ရန်, စနစ်အတွက်ဖိုင်အမျိုးအစား display ကိုသက်ဝင်စေပါ။
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Explorer ကို" နှင့် tab ကိုသွားပါ "View".
အပိုင်း "Show သို့မဟုတ်ဝှက်" ပွိုင့်စစ်ဆေး "FILENAME ၏ချဲ့ထွင်မှု".
သို့မဟုတ်သင်သုံးနိုငျ "Options ကို Explorer ကို".
စာနယ်ဇင်း Alt ဦးဝင်း + R ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသတ်မှတ်သကဲ့သို့ကော်ပီကူး:
RunDll32.exe shell32.dll ကို, Options_RunDLL 7
သို့မဟုတ်ကျင်းပရန် ဦးဝင်း + S ကို နှင့်ရိုက်ထည့်ပါ "Manager ကို".
အဆိုပါ "Task Manager ကို" ဖွင့်လှစ် "File" - "အသစ်တစ်ခုကိုတာဝန် Start".
tab ကို "View" ရှာတွေ့ "extensions တွေကို Hide ... " နှင့် uncheck လုပ်ပါ။
settings ကို Apply ။
Method ကို 1: XYplorer
XYplorer - အမြန်ဆုံးနှင့်အဆင့်မြင့်ဖိုင်မန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ tabs များ၏အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေဒီဇိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် configuration များ, နှစ်ဆ panel ကိုအများကြီးပိုပြီးရှိပါတယ်။ ဒီပရိုဂရမ် paid, ဒါပေမယ့်ရက်ပေါင်း 30 အဘို့အစမ်းဗားရှင်းရှိ၏။ ရုရှားဘာသာစကားအားဖြင့်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
တရားဝင် site မှ XYplorer download,
ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "နာမည်ပြောင်းရန်".
'dot ပြီးနောက်နှစ်သက်တဲ့ extension ကို Specify ။
သင်တို့သည်လည်းတစ်ပြိုင်နက်တည်းမျိုးစုံဖိုင်တွေရဲ့ extension ကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
အရာဝတ္ထု၏နှစ်သက်တဲ့အရေအတွက်မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်ဆက်စပ် menu ကိုမြွက်။
ယခု set ကိုအမှတ်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ, အလိုရှိသောအမျိုးအစားကိုရွေးပါကအပြီးမောင်းထုတ် "/ E ကို".
သင့်အနေဖြင့်စာတစ်စောင်နှင့်အတူလှည့်လည် icon ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, အကြံဉာဏ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များရနိုင် "ငါ"။ သငျသညျကိုအမည်ပြောင်းခွင့်အထဲကရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်လျှင်, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "View ... "။ ညာဘက်ကော်လံမှာတော့သင်ဟာပြောင်းလဲမှုများကိုမြင်လိမ့်မည်။
Method ကို 2: NexusFile
NexusFile, သင်၏အကြိုက်မှအသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်စွမ်းနှစ်ခုပြားရှိပါတယ်ဖိုင်များကိုအမည်ပြောင်းရန်လုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းကိုပေးစွမ်းသည်နှင့်အခြားအသုံးဝင်သော features တွေပါဝင်သည်။ ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ရုရှားအပါအဝင်ဘာသာစကားမျိုးစုံ, ထောက်ခံပါတယ်။
တရားဝင် site မှ NexusFile download,
လိုချင်သောအရာဝတ္တုအပေါ် Context Menu ကဖွင့်ပါနှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "နာမည်ပြောင်းရန်".
တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံလယ်ပြင်တွင်, လိုအပ်သော extension ကိုရိုက်ထည့်ပါနဲ့ save လုပ်ပါ။
NexusFile ခုနှစ်, XYplorer နဲ့မတူပဲ, ရှိသမျှကိုရှေးခယျြအချို့ဖိုင် extension ကိုတစ်ပြိုင်နက်သတ်မှတ်ထားသောပေမယ့်တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီဖိုင်တစ်အချိန်တွင်အလိုရှိသောဒေတာသတ်မှတ်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်လို့မရနိုင်ပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင်ပါကအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 3: "Explorer ကို"
စံသုံးပြီး "Explorer ကို"သင်သည်မည်သည့်တပ်မက်လိုချင်သောအရာဝတ်ထုအမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒေါင်းအရာဝတ္ထုမှာအားလုံးတိုးချဲ့ရန်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကဖြစ်သင့်သည်ကိုအတိအကျအရာကိုသိ, ဥပမာသောအခါဤစကားမှန်သည်, .FB2 သို့မဟုတ် .EXE။ သို့သော်အခြေအနေကကွဲပြားခြားနားနေပေမည်။
လိုချင်သောဖိုင်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါအဆိုပါဖြတ်လမ်း menu ပေါ်တွင် right-click ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "နာမည်ပြောင်းရန်".
အရာဝတ္ထု၏နာမတော်ပြီးနောက်အမှတ်နဲ့ extension အမျိုးအစားကိုမတ်တပ်ရပ်ရပေမည်။
စာနယ်ဇင်းများ ဝင်ရောက်ပြောင်းလဲမှုများကို save ဖို့။
Method ကို 4: "စစ်ဌာနချုပ်လိုင်း"
သငျသညျမျိုးစုံတ္ထုအမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကို "command line ကို" သုံးပါ။
လိုချင်သောဖိုင်တွဲ Locate, အဆင်းကိုင် အဆိုင်း ကီးဘုတ်ပေါ်နှင့်ကြောင့်ပေါ်တွင် right-click လုပ်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းဆင်းကိုင်ထားအလိုရှိသောဖိုင်တွဲသွားနိုင်ပါတယ် အဆိုင်း နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆို Context Menu ကဖွင့်လှစ်။
ကို Select လုပ်ပါ "ပွင့်လင်းစစ်ဌာနချုပ် Window".
အောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ပါ:
ren * .wav * .wma
* .wav- ဤသူသည်သင်တို့ကိုပြောင်းလဲချင်သောပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
* .wma- ထိုပုံစံကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဖိုင်များကို extension ကို .wav.
ဤတွင်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်သင် (ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website အပေါ်အထူးအပိုင်းတွင်လေ့လာသင်ယူနိုင်သည်) မှန်ကန်သောပုံစံအတွက် contents တွေကိုကြည့်ရှုရန်ဆန္ဒရှိလျှင် converting ၏အားသာချက်ယူရန်လိုအပ်သောကြောင်းစိတ်ကိုထားပါ။ ဒါဟာ extension များ၏ Compatibility ကိုစဉ်းစားရန်အညီအမျှအရေးကြီးပါတယ်။